LA OGAADAY: Sababtii Keentay In Manchester United Ku Guul-darraysato Saxeexa Ousmane Dembele & Shirqoolkii Ay Barcelona Maleegtay Ee La Iska Fahmay - Gool24.Net
LA OGAADAY: Sababtii Keentay In Manchester United Ku Guul-darraysato Saxeexa Ousmane Dembele & Shirqoolkii Ay Barcelona Maleegtay Ee La Iska Fahmay
Heshiiskii amaahda ahaa ee Manchester United ay ku doonaysay weeraryahanka reer France ee Ousmane Dembele ayaa burburay daqiiqadihii ugu dambeeyey ee maalintii Isniinta, xilli la filayay in laacibkani uu usoo duuli doono UK oo uu Red Devils ka mid noqon doono.
Manchester United ayaa doonaysay in Dembele uu firfircoonaysiiyo afkeeda hore ee weerarka gaar ahaan garbaha, isla markaana uu noqdo beddelka Jadon Sancho oo ay ku guul-darraysteen inay lasoo saxeexdaan.
Laakiin wada-hadallada u dhexeeyey labada kooxood iyo ciyaartoyga ayaa burburay kaddib markii ay Barcelona soo dhigtay shuruud adag oo Ousmane Dembele uu u arkay rakaato iyo isbaaro isaga shirqool ku ah, isla markaana mustaqbalkiisa dambe dabar adag ku noqon doonta.
Barcelona ayaa markii hore waxay ku adkaysatay in Ousmane Dembele uu kaliya ku bixi karo iib rasmi ah si ay u hesho lacag dhan £23 milyan oo Gini oo ay xilligaas uga baahnayd inay kusoo iibsato Memphis Depay, laakiin Red Devils ayaa iska diidday inay ogolaato inay si rasmi ah u iibsato Dembele.
Manchester United waxa kaliya oo ay ballanqaaday in sannadka amaahda ah ee Dembele uu amaahda ugu ciyaarayo inay bixin doonto dhamaan gunnooyinkiisa iyo lacagta amaahda ah.
Xaaladda oo halkaa maraysa ayay Barcelona u muujisay laacibkeeda in-jilicsan waxaanay u sheegtay inay u ogoshahay iibka laakiin ay marka hore tahay inuu saxeexo heshiis cusub oo uu waqtiga ugu kordhinayo si loogu ogolaado inuu amaah ku baxo, taas uu laacibkanna u arkay isbaaro iyo mid lagu rakaataynayo, waxaanu markiiba kaga falceliyey diido.
Heshiiska asalka ah ee Ousmane Dembele uu kula jiro Barcelona oo ku eg badhtamaha sannadka 2023, ayay kooxda reer Spain u aragtay in haddii uu isku muujiyo Manchester United oo uu ciyaar fiican soo bandhigo in markaa uu go’aansan karo in aanu saxeexin heshiis kordhin si uu ugu cadaadiyo in si rasmi ah loo iibiyo amaba uu heshiis xor ah ku baxo.